अर्थमन्त्रीको अमेरिकी सांसदलाई ब्रिफिङः एमसीसी संसदबाट जसरी नी पास हुन्छ
Home राजनीति अर्थमन्त्रीको अमेरिकी सांसदलाई ब्रिफिङः एमसीसी संसदबाट जसरी नी पास हुन्छ
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले अमेरिकी सांसदहरुसंग भेटवार्ता गरेका छन्। नेपाल भ्रमणमा रहेका अमेरिकी कँग्रेसका सदस्यद्धय जर्ज होल्डिङ र अमी बेरासंग डा. युवराज खतिवडाले भेटवार्ता गर्दै छिटै नै एमसीसी संसदबाट पास हुने आश्वासन दिएका छन् ।
अर्थमन्त्रीले अमेरिकी सांसदहरुसंगको भेटमा भनेका छन् की एमसीसी नेपालको विकासका लागि निकै नै महत्वपूर्ण परियोजना भएको र चाँडै संसदबाट पास हुनेमा हामी ढुक्क छौं । नेपाल र अमेरिका दुई देश बीचको सम्बन्ध धेरै पुरानो भएको र नेपालको शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि जस्ता क्षेत्रको विकासको लागि अमेरिकाले निरन्तर सहयोग गरि रहेको अर्थमन्त्री खतिवडाले बताएका छन् । उनले नेपालको लागि निरन्तर सहयोग गरेकोमा अमेरिकालाई धन्यवाद पनि दिएका छन् ।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले नेपालका विकास प्राथमिकता, आर्थिक स्थिति र लगानीमैत्री वातावरणका लागि भएका प्रयासका बारेमा जानकारी समेत गराएका छन् । अर्थमन्त्रीले लगानीको लागि नेपाल अति नै धेरै उपयुक्त गन्तव्य भएको उल्लेख गर्दै नेपालमा उत्पादन भएका बस्तुको बजारका लागि कुनै पनि समस्या उत्पन्न नहुने पनि बताएका छन् ।गतबर्ष भएको लगानी सम्मेलनमा अमेरिकी निजी क्षेत्रको उत्साजनक सहभागिता रहेकोमा पनि अर्थमन्त्री खतिवडाले खुसी पनि व्यक्त गरेका थिए ।
खतिवडाले एमसीसी अन्तर्गत प्राप्त हुने अमेरिकी सहयोग नेपाललाई अति आवश्यक भएको कुरामा कुनै पनि दुविधा नभएको उल्लेख गरेका छन् । उनले एमसीसी सम्झौता संसदबाट पास हुने आश्वासन दिएका छन् । खतिवडा समक्ष अमेरिकी कंग्रेसका सदस्यले नेपालको अर्थतन्त्र, निजी क्षेत्रको भूमिका, राष्ट्रिय प्राथमिकताका क्षेत्र तथा हितका पक्षमा नेपाल सरकारले अघि सारेका विषयमा चासो व्यक्त गरेका छन् र नेपालको विकासले अमेरिकाको निजी क्षेत्रमा सकारात्मक सन्देश दिने धारणा पनि राखेका थिए।
Previous articleनेपालमै तयार भयो कोरोनाविरुद्धको खोप, परीक्षण गर्न माग
Next articleनेपालमा कोरोनाको कारण जनता भोकभोकै,मन्त्री दुई करोड सात लाखको गाडी किन्दै